Isilindele isivunguvungu esiza no-Ephreli iSundowns - Impempe
Isilindele isivunguvungu esiza no-Ephreli iSundowns
Abaqeqeshi beMamelodi Sundowns, oManqoba Mngqithi, Rulani Mokwena noSteve Komphela
Omunye wabaqeqeshi beMamelodi Sundowns, uRulani Mokwena ubona ingozi abazobhekana nayo ngenyanga ezayo njengoba icela eshumini imidlalo okumele bayigijime ngo-Ephreli.
UMokwena ubenaba ngezinhlelo iqembu lakhe elinazo njengoba kufanele liqoqe amaphuzu agcwele kwiBlack Leopards kwiDStv Premiership ngeSonto ngo-5 ntambama.
Ngemuva kwalo mdlalo iDowns izobhekana nenkinga yokudlala kwemibili yeCAF Champions League, owodwa weNedbank Cup ne-Orlando Pirates bese kuba eyeligi emihlanu okukhona kuyo owaMaZulu kanjalo neGolden Arrows.
Ngokwalo mqeqeshi vele akukho abasakwenzile ngaphandle kokuqoqa imiphumela emihle.
“Ungawuhamba wonke umhlaba asikho isicoco esinqotshwa ngoMashi. Kungaba iChampions League kumbe iligi kodwa asikho isicoco esinqotshwa ngoMashi.
“Lokhu kufanele sikukhumbule njalo ukuze sizoqhubeka nalo mgqigqo omuhle esihamba ngawo,” usho kanje uMokwena.
“Sinenhlanhla yokuthi abadlali bethu bathi bebatshazwa ikhono thina sibe sibona ukuba abantu abaqotho kwabo ngasese.
“Akulula ukwenza lokhu esikwenzayo (ukungashaywa emidlalweni eyahlukenene engaphezulu kwengu-25) kodwa ukube abadlali bethu ababona la bantu abayibona ngabe sizwa ngendaba nathi ukuthi kukhona iqembu elike linqobe imidlalo eminingi kanje,” kusho lo mqeqeshi.
UMokwena uthi ubaqonda kahle abadlali bakhe futhi uyaziqhenya ngabo.
“Ngabe asikho la sikhona ukube abenzi ngale ndlela abenza ngayo abadlali. Kunezinto eziningi obekufanele abadlali bethu bazishintshe ezimpilweni zabo zangasese nangempela bakwenza lokho.
“Lokho nje kukodwa kukhomba ukuthi hloboluni lwabantu esinabo abangabadlali bethu. Isimo esikuso siphoqa ukuthi sizame ngaso sonke isikhathi ukuthola ukuthi imiqondo yabadlali ikuphi.
“Konke lokhu okwenzekayo kungenxa yokuzinikela kwabo nokuguqula kwabo indlela ababuka ngayo ibhola.
“Ukuzwana nokuthembeka endleleni abadlala ngayo yikhona okusibeke kuleli zinga esikulo manje.
“Kusemqoka ukuthi sizehlise sijabulele lokhu okuncane esikutholayo ukuze kuzoqala kufike okukhulu.
“Kuzoqala kuthi ukuqonga ngo-Ephreli lapho sinemidlalo khona eminingi eduze bese kuthi ngoMeyi kulapho kuzohlaluka khona ukuthi lezi zicoco esisesembangweni wazo zizogoduka nobani,” kusho yena.
Mayelana neLeopards uMokwena ulindele umdlalo onzima ngoba leli qembu akufanele ubheke indawo elikuyo.
“Uma uzoya ngokuthi iLeopards isezansi uzothola induku ngoba la ikhona kwi-log akusho ukuthi leyo iyona ndlela edlala ngayo.”
Previous Previous post: UTembo uphoxekile iSuperSport ihluleka ukuwina kwiStellies
Next Next post: UZungu ungufakazi esigamekweni sokucwasa e-Europe